Fananganana ny faritra faha-23: mangataka ny hiaraka amin’i Vatovavy ny any Ikongo | NewsMada
Tsy mbola milamina ny fametrahana ny faritra faha-23 eo amin’i Vatovavy sy i Fitovinany. Nivory tao amin’ny « Tranobe satrokefa » ny 8 oktobra teo ny taranaka Ravaloarivo, Ndrenony avy any Ikongo sy ireo ampanjaka avy any Mananjary, Ambohitsara ary Nosy varika sy Ifanadiana.
Nambaran’izy ireo ta­min’izany fa tokana i Vatovavy ary iray tsy mivaky ka nanaovan’izy ireo antso avo ho ren-tany, ren-danitra amin’ny alalan’ireo ampanjaka ireo izany. Nan­terin’izy ireo koa fa miaraka amin’i Vatovavy ny any Na­morona, araka ny fangatahana nataon’ireo ampanjaka. « Matoky izahay Andria­matoa filoha fa manana anao satria tato amin’ny « Tranobe masina » no na­naovana fanambarana fa omena ny faritra Vatovavy ny any Ikongo raha tafaverina amin’ny toerana ianao. Hiaraka amin’Ikongo ny any Ifanadiana sy Nosy Varika. Tafiditra ao anatin’izany koa ny any Namorona ary renivohitra kosa i Mananjary », hoy izy ireo.
Nanterin’ny fanambaran’izy ireo fa tsy ampy ny fijerena ny fizaram-paritra ara-jeografia. « Ilaina ny mijery lafin-javatra hafa sy marolafy. Tsy afa-misaraka amin’i Vatovavy izahay raha ny tantara sy ny kolontsaina », hoy ihany ny fanambarana. No­tanisaina tamin’izany fa mi­tovy ny fomba amam-panao sy ny ara- drazana. Midika ny maha iray ka tsy azo sarahina izany, araka ny nambaran’izy ireo hatrany. « Mitovy ny otrikarena eo amin’ny distrika efatra : Harena an-kibon’ny tany sy ny voly fanondrana. Tsy misy tombontsoanay mihitsy tamin’i Fitovi­nany nandritra ny taona maro. Mety aminay ny miaraka amin’i Vatovavy mba hampilamin-tsaina ny vahoaka. Hamafisinay fa miaraka amin’i Vatovavy ny any Ikon­go…», hoy izy ireo. Nana­sonia izany ny Ndre­nonibe, Razafimandimby Bertrand.